Voka-pikarohana : hanolotra ny “latino bagasy” i Desp | NewsMada
Voka-pikarohana : hanolotra ny “latino bagasy” i Desp
Chiapetto Angelo Antonio, io ny tena anaran’ny tovolahy. Mandray roa eo amin’ny fiaviana. Ny ray niteraka, teratany vahiny ary ny reniny kosa malagasy. Toa maka izay endrika izay ihany koa ny kanto ataony.
Desp, solon’anarana entin’i Chiapette Angelo Antonio. Azo avy amin’ny “Desperado”. Anarana midika fa misakaiza akaiky tokoa amin’ny gitara ity mpanakanto ity. Nilofo an-taona maro ho amin’ny fanambarana ny latino amin’ny bagasy i Desp mba hahazoana manajary mozika vaovao tokana aman-tany sahaza ny rehetra nantsoiny hoe: “Latino bagasy”.
Ankehitriny, masaka ny nahandro ka hatolotra ny mpankafy, etsy amin’ny Telozoro Andrefanambohijanahary, ny alin’ny zoma 6 oktobra izao. Voka-pikarohana lalina no nahazoana ny “latino bagasy” satria mifanao atsimo sy avaratra raha ireto gadona ireto nefa natambatr’i Desp hanome mozika vaovao. Ny fomba fitendry ny gitara sy ny fomba nentina nandrindrana ny rindram-peon’ireo jihy (cordes) amin’ny gitara ihany koa, tsy mitovy amin’izay efa fahita anatin’ny sehatry ny fitendrena ny gitara. “Santatra am-bava rano ho amin’ny fampahafantarana ny “latino bagasy” ity hatao ity”, hoy izy.
Hanotrona an’i Desp eny an-toerana ireo mpitendry matihanina ahitana an’i Mamitiana (korintsana, amponga…), Daddy Rast (gitara marani-peo), Pharalah (gitara lafika sady mpamorona). Hanokatra ny sehatra i Farah Gloum. Ankoatra ny fanoloran’I Desp ireo sanganasany hisy ihany koa ny filalaovana ireo sanganasana mpanakanto hafa (malagasy sy vahiny).